विराटनगर, १६ भदौ । बिरामी वा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि त्रसित हुँदै व्यवस्थापनले अस्पताल हतारमा सिल गर्ने गरेको छ ।
सरकारी एवं निजी अस्पताल सिल गर्नु नौलो मानिन छाड्यो। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, निदान अस्पताल पनि सिल गरिए। सिल गर्नुको कारण सोध्दा अस्पताल व्यवस्थापकको सहज उत्तर हुन्छ, ‘संक्रमण नफैलियोस् भनेर।’
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न मुलुकभरका सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। तर, अस्पताल नै सिल भएपछि उपचार गर्न कहाँ जाने ? विज्ञ भन्छन्, ‘अस्पताल उपचार गर्ने ठाउँ हो, सिल गर्ने होइन।’
कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको ह्याम्स अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. ज्योतेन्द्र शर्मा सुरक्षात्मक मापदण्ड पालना गर्ने हो भने अस्पताल सिल गर्नु नपर्ने बताउँछन्। ‘संक्रमित बढिरहेका छन्। उपचार गर्ने ठाउँ नै सिल गर्ने हो भने बिरामी कहाँ जाने ? उनी प्रश्न गर्छन्। करोडौं लगानी गरिएका र सयौं जनशक्ति भएका अस्पतालले पूर्वाधार एवं तालिमप्राप्त जनशक्ति भएकाले पनि अस्पताल सिल गर्नु नपरेको उनी बताउँछन्।
नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ। अस्पताल सिल गर्दा खोप लगाउन वा अन्य आधारभूत समस्या लिएर आएका बिरामीलाई अप्ठेरो परेको छ। डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘एकातिर संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीलाई आइसोलेसनमा जानुपर्ने होला। ज्यानको माया छ। अर्कोतर्फ बिरामीको मौलिक हकको कुरा छ। सामञ्जस्य मिलाउन बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्छ।’
डा. तिवारीका अनुसार ८ घण्टामा डिसइन्फेक्सन गर्न सकिन्छ। डिसइन्फेक्सनपछि बिरामी भर्ना गरी उपचार थाल्न कुनै गाह्रो छैन। ‘अस्पताल सिल गर्नुमा प्राविधिकभन्दा पनि मनोसामाजिक समस्या देखिन्छ’, उनी भन्छन्।
पीपीई, मास्क, स्यानिटाइजरलगायत सुरक्षा सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था नभएको बेला स्वास्थ्यकर्मी उपचारमा हिच्किचाउन सक्ने डा.प्याकुरेलको बुझाइ छ। संवैधानिक हक कार्यान्वयन र आधारभूत सेवा नियमित राख्न संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहले छुट्टै भवन तथा घर भाडामा लिनु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ।
अस्पताल व्यवस्थापनको सहयोग, स्वास्थ्यकर्मीको सजगताबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष आरएस भण्डारी बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र नेपाल सरकारको गाइडलाइन्स पालना गरेर काम गर्दा अस्पताल सिल गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ